China otomatiki Zvichienderana Endoscope Washer Disinfector Mugadziri uye Mutengesi | Shinva
Otomatiki Flexible Endoscope Washer Disinfector
Otomatiki Flexible Endoscope Washer-disinfector yakagadzirirwa zvichibva pane yakajairwa ISO15883-4 iyo yakakosha inoshandiswa kugeza uye disinfection yeFlexible Endoscope.
Kushanda kwepamusoro kushanda
Mutasvi akateedzera otomatiki endoscope washer anogona kupedzisa iyo yekuwachisa uye disinfection maitiro echimwe chidimbu cheyakagadzika endoscope mukati memaminitsi gumi nemashanu, ichivandudza zvakanyanya kushanda kwemagumo endoscopes.
Dhizaini yekudzivirira ye Endoscope
■ Leakage bvunzo basa
Iyo Endoscope leakage bvunzo ichave yapera usati wasangana nemvura irimo mukamuri, uye inogona kuita kuenderera kuyedza panguva yekutenderera. Kana kukosha kwekuonekwa kwakadarika kukosha kwakatemwa, sisitimu yacho ichaburitsa chiratidzo che alarm, uye otomhanyisa iyo kutenderera
Maitiro ekutevera system
■ Kugadzira kudhinda data
Iyo purinda inogona kudhinda iyo yekuwachisa uye disinfection maitiro data kune yega endoscope, zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kuchengetedza zvinyorwa.
■ Kugadzirisa manejimendi.
Iyo sisitimu inogona kuunganidza ruzivo rwevanogadzira endoscope uye iyo yekuwachisa uye disinfection maitiro data anogona kubatanidza mushandisi manejimendi komputa sisitimu kuburikidza netiweki, iri nyore kuwana kune yekufananidza manejimendi kune murwere ruzivo uye endoscope kuwacha uye disinfection ruzivo.
Kuzvidzivirira kwehutachiona basa
After Mushure mekupedza kugadzirisa, kugadzirisa kana kukanganisa kwemuchina, inofanirwa kumhanyisa chirongwa chekuzvidzivirira.
■ Iyo yega-disinfection basa inogona kunyatso kuuraya mukina muchina nepombi, kusanganisira iyo 0.1um firita, kudzivirira iyo washer-disinfector kubva pakuva sosi yekusvibisa.
100% Kushambidza uye disinfection
■ Kwese-kwese, kuzadza pombi nekuwisira utachiona
Imba yekuwachisa yakashongedzerwa nebhaizi yekupfapfaidza nekutenderera ruoko rwekupfapfaidza iyo inogona kugadzira kuwacha uye disinfection kune yekunze nzvimbo yeiyo endoscope, nepo mvura inotenderera ichigona kuenderera kugeza uye disinfection kune iyo yese yemukati mhango yeiyo endoscope.
■ Endoscope lumen kumanikidza booster pombi
Iine yakazvimirira endoscope lumen booster pombi, inogona kuenderera ichigeza uye disinfection, gasi kana jekiseni remvura uye kugadzira biopsy kana kubvisa lumen, kudzivirira kuumbwa kwebhakitiriya biofilm.
■ Mvura yakasvinwa ichikwira
Mushure mekuuraya utachiona, inosuka iyo endoscope nemvura iyo inosvinwa ne0.0um firita kuti isasvibiswe nechipiri nekusachena kwemvura inomuka.
■ Kuomesa basa
Basa rekuomesa rinogona kuona kuomeswa kwemwenje wemukati weiyo endoscope ine maviri modhi, kuomesa mweya uye kuomesa doro.
Kudzivirirwa kwakakwana kweanoshanda
■ otomatiki musuwo, tsoka chitiviri chinja
Chimbofungidzira otomatiki gonhi regirazi, zviri nyore kucherechedza kushambidza uye disinfection chimiro chinja chetsoka, musuwo unogona kuvhurwa nekukanya zvinyoro-nyoro chinja chetsoka.
■ Yakapoteredzwa zvizere
Mutasvi akateedzana otomatiki endoscope washer-disinfector yakagadzirirwa neakavharidzirwa zvakakwana chimiro. otomatiki magirazi magonhi achadzvanya musuwo wekusunga gasket zvakanyanya, kudzivirira hwema hwehutachiona uye kuchengetedza kweanoshanda hutano hwakanyanya.
■ Makemikari zvinowedzerwa otomatiki akawedzera
Mukuita kwekuwacha uye disinfection, makemikari ekuwedzera, akadai ma enzymes, doro uye mishonga inouraya utachiona inogona kuyerwa uye kuwedzerwa otomatiki.
■ Utachiona hwekutapirisa hwekuenzanisira
Mutasvi B akateedzana ne otomatiki disinfectant sampling chishandiso chiri nyore kune vashandisi kuongorora kuwanda kweiyo disinfectant uye kuchengetedza kuchengetedzwa kweanoshanda.
■ Kuuraya utachiona otomatiki kuwedzera uye kuita basa
Rider B akatevedzana anoshongedza neine utachiona otomatiki kuwedzera uye kubuda basa. Paunenge uchiwedzera mushonga unouraya utachiona, ingo dururira mushonga unouraya utachiona mukamuri yekuwachisa uye wotanga iyo chirongwa chekuwedzera. Kana uchinge wabuda, ingotanga chirongwa chekubvisa hutachiona.
Pashure: XH507 Dental Unit
Zvadaro: Otomatiki Door Spray Washer
Yakarembera mhando yekuchengetedza kabhodhi
Plate mhando yekuchengetedza kabhodhi